Waa maxay walaaca Austria ka qabto gurigii uu ku dhashay Hitler? | Radio Himilo
Home / Deegaan / Waa maxay walaaca Austria ka qabto gurigii uu ku dhashay Hitler?
Waa maxay walaaca Austria ka qabto gurigii uu ku dhashay Hitler?
Himilo FM – Adolf Hitler, hoggaamiyihii Naasiyiinta, waxa uu ku dhashay dhismo ku yaalla Braunau oo katirsan dalka Austria kuna dhaw xudduuda uu dalkaaasi la wadaago Jarmalka.
Tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida, dowladda Austria ayaa ku dadaalaysay inay jarto xiriirka gurigaasi iyo dhaxalkii uu ka tagay Hitler.
Labo sanno kaddib, waxay Austria la wareegtay guriga oo ay muddo laheyd Gerlinde Pommer oo ehelkeeda degganaayeen guriga kahor inta uusan ku dhalan Hitler. Ms Gerlinde ayaa ku doonaysa gurigaasi qiimo lacageed oo gaaraya 1.7 Milyan oo doolar.
Warbaahinta Deutsche Welle ee dalka Jarmalka ayaa soo warisay in qareenka Gerlinde uu doonayo lacag mag dhaw ah oo laga siiyo dhismaha kaddib markii ay dowladda siisay haweenayda lacag dhan 355,000 oo doolar.
Qiimaha guriga oo leh goob la dhigto gawaarida ayaa la tilmaamay in lagu qiimeeyay 1.7 Milyan oo doolar balse Ms Gerlinde waxay la tahay in dowladda aysan dooneyn inay bixiso lacagtaasi.
Austria ayaa si joogto ah u kireysan jirtay guriga tan iyo toddobaatameeyadii iyadoo u adeegsan jirtay inay ku taageerto dadka naafada ah. Waxay haweenayda diiday codsiyo dhowr jeer uga yimid dowladda oo looga iibin lahaa guriga.
Sanadihii danbe, Saraakiisha dowladda Austria ayaa ka walaacsanaa in gurigii uu ku dhashay Hitler inuu noqdo xarun weyn oo kulmisa kooxaha aaminsan aragtida Naasiyiinta, waxayna dowladda qaaday tallaabooyin looga hortagayo arrintaasi si loo ilaaliyo danta guud.
Previous: Real Madrid oo Kroos ku badalanaysa Mauro Icardi
Next: Man City iyo Real Madrid oo ku dagaalamaya xiddig 22 jir ah